Warbixintii Abdifatah Mohamud Hussein
SAWIRADA XAFLADA HALKAN KA EEG.....
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu soo dhawaynayey Dowladda u dhalatay ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay 15-10-04 Hotel ka casriga ah ee Miraj Hotel oo ku yaala magaalada Islamabad ee dalka Pakistan.
Waxaa kasoo qayb galay munaasibadaas shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Islamabad iyo marti sharif kale oo ajnabi ah, iyadoo wajiyadooda ay ka muuqanaysay shacuur wadaninimo iyo farxad aan lasoo koobi Karin.
Ugu horayn waxaa lagu furay aayadaha Qur�aanka Kariimka ah iyo wacdi diini ah oo ay halkaas kasoo jeediyeen Culimadii Soomaaliyeed ee magaalada. Waxaa markaa kadib laga dhawaajiyey heesta astaanta u ah Calanka Soomaaliya, iyadoo si qiiro ku dheehantahay loogu wada istaagay.
Intaa kadib waxaa lagu soo dhaweeyey cod baahiyaha Garyaqaan Maxamuud Cabdi Cali Bayr oo si aad ah uga hadlay muhiimada ay leedahay nabada iyo dowladnimada, isagoo ku booriyey shacabka Soomaaliyeed ee walaalaha ah inay dhammaantood gacmaha is qabsadaan kana shaqeeyaan sidii horumar waara loo gaari lahaa.
Waxaa kadib hadalkii la wareegay Prof. Yusuf Hersi Ahmed oo ka hadlay taariikhdii Gobanimo doonka Ummadda Soomaaliyeed iyo sidii lagu soo helay xornimadda aan maanta ku naaloonayno. Prof. ka oo munaasibadan ka hadlayey ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed Midnimo una rajeeyey dowladda cusub guul iyo horumar.
Guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Pakistan Adan Hassan Mataan ayaa kasoo jeediyey xaflada areyo isugu jiray guubaabo iyo waano ku jeeda dadka iyo dowladda Soomaaliyeed. Wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay si wada jir ah u taageeraan dowladda iskana cafiyaan wixii horay u dhaxmaray dhexdooda, ciribtiraana qabyaalada. Wuxuu dowladda cusub u rajeeyey mid kasoo baxda xilka lasaaray.
Eng. Faysal Rashiid Cumar oo lahadlayey aqoon yahanka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay in ay lagama maarmaan tahay inay wadankooda dib ugu soo noqdaan si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dalka kana shaqeeyaan horumarkiisa.
Ugu danbayn, dhammaan Ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Pakistan waxay soo dhawaynayaan una hanbalyeynayaan Dowladda u dhalatay iyo madaxwaynaheeda ladoortay Mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed.
Waxaa isku soo dubariday soona agaasimay xafladaan:-
Abdifatah Mohamoud Hussein "Rizoti"
Abdinuur Ali Gooni
Abdimajid Ali Salaad
Eng. Nasir Said Nasir
Abdihakim Mohamed Saleeban
Ahmed Said Qaloonbi.
Abdifatah Mohamud Hussein